Ngokuvamile, abesifazane kule "isimo ezithakazelisayo", ezibuza ngalokho ukuthi amabhilikosi abakhulelwe. It zingaphendulwa ngokuqiniseka uthambekele kokuhle, ngoba lokhu izithelo ezomisiwe akuyona kuphela ewusizo kakhulu, kodwa kwezinye izimo ngisho ngaphandle kwalo. Kodwa kabi futhi akufanele kube. Sinikeza ndawonye namuhla ukuthola ukuthi yini amabhilikosi ngakho kahle phakathi nenkathi yokukhulelwa.
ulwazi olujwayelekile mayelana izithelo ezomisiwe
Njengoba wazi, esikhathini ekwindla-ubusika akulula ukubheka izithelo ukuthi kungaba ewusizo ngempela emzimbeni kamama esizayo. imikhiqizo Nice ezibukeka ukuthi basuke amazwe kithi evela phesheya, naphezu kokuvivinywa kwalo ezikhangayo ukubukeka, cishe balahlekelwa zonke amavithamini namaminerali ngenxa ukucutshungulwa amakhemikhali kanye nezivimbelakuvunda. Ngaphezu kwalokho, izithelo zivame eqoqwe ngesimo yokungavuthwa ukuthi usuqede inqubo nokuvuthwa komgwaqo. Kulokhu, izithelo awunaso isikhathi buthelela amavithamini anele futhi futhi ewusizo mayelana nomzimba womuntu. Kanti kungokunye - izithelo ezomisiwe! Bona ukugcina wonke umsoco, amaminerali, amavithamini kanye ukulandelela izakhi. Ngaphezu kwalokho, ngo-inqubo ukukhiqizwa yabo azisetshenziswa colorants, flavorings namanye amakhemikhali.
Kubafanele zinakekelwe ngokukhethekile futhi ukunambitheka izithelo ezomisiwe. Ziyakwazi amnandi kakhulu, kodwa musa aqukethe ushukela, futhi fructose kanye glucose, abangenalo nethonya elilimazayo amazinga egazi-insulin, futhi musa konakalisa ukuma. Omunye izithelo ethandwa kakhulu omisiwe ezweni lethu, yebo, iyona amabhilikosi omisiwe. Sinikeza ngijwayele izithelo omisiwe.
Uyini amabhilikosi omisiwe?
Lokhu izithelo ezomisiwe kuyinto amabhilikosi izithelo, omiswe. amabhilikosi omisiwe akufanele ibe amathambo. Uma ababambanga wena, isisekelo izithelo ezomisiwe ayizange amabhilikosi kanye amabhilikosi omisiwe. Ukukhiqizwa amabhilikosi omisiwe bekwi ikakhulukazi emazweni ase-Asia, kanye e-Turkey, Ukraine kanye Krasnodar Territory. Nokho, angathengwa cishe kuyo yonke indawo.
Indlela ewusizo amabhilikosi omisiwe kwabesifazane abakhulelwe?
Okuxakayo nje amavithamini eziqukethwe izithelo ezomisiwe akuzona kakhulu - kuphela A, B no-C Nokho, amabhilikosi abacebile kakhulu kwezokumbiwa phansi. Ngakho, insimbi, potassium, magnesium, i-calcium ne phosphorus liqukethe ezingaphezu kuka izithelo kakhulu fresh. Magnesium kusiza ekuvimbeleni kodwa futhi ekwelapheni sokuntuleka kwegazi kanye anaemia hhayi kuphela. Calcium kuqukethwe amabhilikosi omisiwe, kusiza ukuqinisa amathambo ingane ekhulayo esibelethweni, kanye potassium - imisipha.
amabhilikosi omisiwe ngesikhathi sokukhulelwa ebonisa abesifazane unezinkinga isihlalo. Ngoba lokhu izithelo ezomisiwe, kanye nezithelo ezintsha ibhilikotsi, kunomphumela evelele laxative.
Futhi, wonke umuntu uyazi ukuthi owesifazane esimweni ngokuvamile ufuna ukunambitha into sweet. Kodwa ukuxhashazwa candy noshokholedi is hhayi Kunconywa ngesikhathi sokukhulelwa. Usizo kuza amabhilikosi. Ngoba lokhu izithelo ezomisiwe has a ukunambitheka amnandi futhi ngeke nje akulimazi umzimba, kodwa futhi nomthelela ukuqinisa amasosha omzimba, okuyinto ebaluleke kakhulu kule nkathi ekuphileni sowesifazane.
Ngaphezu kwalokho, amabhilikosi baba usizo olukhulu phakathi nokukhulelwa edema, ngoba izakhiwo isisu.
Omisiwe amabhilikosi umonakalo ngesikhathi sokukhulelwa
Njengoba ayaziwa e ukusetshenziswa zonke, ngisho umkhiqizo ewusizo kakhulu, kumele uthobele ngesilinganiso. Okuhlukile mthetho akuyona, futhi amabhilikosi omisiwe. Ngakho, uma uhlela ukusebenzisa izithelo ezomisiwe ukuze silwe ukuqunjelwa, kufanele badle amagremu angaphezu 100 ngosuku. Kungenjalo, nomphumela ophambene ingatholakala ngesimo sohudo. Ngenxa yalesi sizathu, lo mkhiqizo is hhayi Kunconywa uma unenkinga wamathumbu, njengoba isimo kungaba ibhebhetheke.
Futhi amabhilikosi contraindicated ngesikhathi sokukhulelwa ukuze abesifazane nge umfutho ophansi wegazi, ngenxa yokuthi kwenza umuntu ukwehla yayo.
Izinkomba ngokusetshenziswa amabhilikosi omisiwe ngesikhathi sokukhulelwa
Ngokuvamile, izithelo ezomisiwe Kunconywa ukuba cishe bonke abesimame abangamalunga sesimweni ezithakazelisayo. Ngemva amabhilikosi omisiwe kusiza ubuyise umzimba amaminirali kumiswa efanele umbungu esizalweni umama esizayo. Uma ngesikhathi sokukhulelwa uhlushwa ukuqunjelwa, asikho isidingo iphendukele izidakamizwa, umane afake ekudleni kwakho, lokhu izithelo ezomisiwe.
With toxicosis eqinile futhi isilungulela, ochwepheshe batusa ukuphuza compote of amabhilikosi omisiwe. Ngaphezu kwalokho, ukuze sigweme izinkinga ne nezinwele, izinzipho ziyaqothuka, nokubhujiswa amazinyo ngesikhathi sokukhulelwa, kungcono ukusebenzisa lezi izithelo ezomisiwe abacebile amaminerali ukulandelela izakhi.
Izindlela zokusebenzisa amabhilikosi omisiwe
Kukhona inala ongakhetha ukusetshenziswa kwalesi izithelo ezomisiwe ukudla. Ngokuvamile, zamabhilikosi kudliwa eluhlaza, akunjalo inani elikhulu namaminerali ewusizo elondolozwe ku-ke. Ungase futhi uyifaka salads ahlukahlukene noma inyama izitsha. Ikakhulukazi kahle ke kuvumelana inkukhu nenyama yenkomo.
Ngaphezu kwalokho, kuvela esihlwabusayo kakhulu kubhakwe kuhlanganiswe nanoma amabhilikosi omisiwe. Kodwa kabi ngesikhathi sokukhulelwa akuyona zinkulu.
Futhi kusukela kule omisiwe izithelo compote kungenziwa ashiselwe. Kuyoba ngisho tastier futhi okunomsoco, uma ukwengeza amabhilikosi omisiwe, omisiwe anganezela kanjalo kukho, asithena apula omisiwe noma amagonandoda.
Ungadliwa kusukela izithelo ezomisiwe ukuze silwe ukuqunjelwa ngesikhathi sokukhulelwa
Ngokuvamile singasho ukuthi bonke izithelo omisiwe obonakaliswe ngandlela-thile umphumela laxative. amabhilikosi omisiwe futhi asithena ngesikhathi sokukhulelwa nethonya elihle ku-perestatiku emathunjini ekuthuthukiseni kusebenta kwato. Uma ukuqunjelwa enkulu usizo compotes kanye infusions we izithelo ezomisiwe.
Ukulungisa ukumnika, kubalulekile ukuba ugcwalise eziyisithupha izinto omisiwe amabhilikosi kanye asithena okuningi ezimbili izinkomishi zamanzi abilayo futhi ushiye ubusuku. Ngakusasa ekuseni baphuze ingxube esiswini esingenalutho. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa yokusetshenziswa uzophawula indlela amathumbu akho asebenze kangcono.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukulungiselela esiphundu, ingxube okunempilo nokunomsoco ugcwalise hhayi kuphela umzimba wakho izakhi, kodwa futhi neqhaza ekulweni ukuqunjelwa. Ukuze wenze lokhu sidinga 200 amagremu zamakhiwane, esilinganayo amabhilikosi omisiwe futhi asithena. Badinga ukuba echotshozwa grinder. Ingxube ingezwe amagremu 100 uju kanye ukuthatha ithisipuni elilodwa ngaphambi sokulala, ngokucophelela ingilazi yamanzi.
Uma udinga laxative, abenza izenzo akudingeki silinde eside, ukunikeza iresiphi elandelayo. Thatha 300 amagremu amabhilikosi omisiwe futhi asithena, omisiwe izithelo inyama egayiwe, kukho amagremu 100 uju kanye 50 amagremu enhlaba oqoshiwe. Zonke izithako udinga uhlanganise kahle futhi udle isipuni esigcwele okungenani kabili ngosuku. Kungenjalo, ingxube kungenziwa basakaza ngesinkwa, futhi ukusebenzisa ngesikhathi sokulala nge ingilazi yamanzi abandayo.
Indlela ukukhetha amabhilikosi
izithelo ezomisiwe ukuletha umzimba wakho kuphela ukuzuza, kumelwe basondele ngokucophelela inqubo kokuyithenga. Phela, namuhla ke Akuyona imfihlo ukuthi abanye abakhiqizi abonakele abayeki ukusetshenziswa sulphur intuthu namanye amakhemikhali ukwenza umkhiqizo ukubukeka ikhange nakakhulu. Yiqiniso, amabhilikosi ezinjalo ngesikhathi sokukhulelwa akuyona kuphela okungelona usizo, kodwa futhi ungakulimaza enjalo sengozini ngalesi sikhathi umzimba. Ngakho-ke, i-choice izithelo ezomisiwe, sebenzisa amathiphu ambalwa:
- ungathathi bhá orange izithelo, kusukela kungenzeka ukuthi liphathwa izinto eziyingozi;
- makudle imikhiqizo yemvelo, ngisho kancane "enothuli" umbala nge Tint grey noma onsundu (ukubukeka ezinjalo kubonisa ukuthi omiswe Kwenziwa vivo);
- khumbula ukuthi omisiwe izithelo akufanele kube tacky, njengoba le libonisa ukuthi nedosushennymi;
- akudingekile ukuthola izithelo shiny, njengoba lokhu kungase futhi kube umphumela ukwelashwa kwamakhemikhali, kungcono uthenge amabhilikosi omisiwe, matte;
- uthinte izithelo kufanele siqine, izimisele ngaphansi iminwe yakhe, kodwa noma kunjalo hhayi ithambe kakhulu.
Namhlanje niyikhulume yini amabhilikosi ewusizo omisiwe kwabesifazane abakhulelwe, mayelana izakhiwo zalo eziyisisekelo. Sinethemba elikhulu lokuthi lolu lwazi ewusizo kuwe onjalo isikhathi kubalulekile yimuphi owesifazane ophilayo njengoba behlakulela umntwana.
Kungakanani womama ukushiya uma bekhulelwe uya kanzima?
Bifurcation - kuyinto ... lo bifurcation yomthambo i-aorta